Inona ny hidin-bisikileta matanjaka indrindra? - Hitaingina Bisikileta
Tena > Hitaingina Bisikileta > Hidin-trano bisikileta - mety vahaolana
Hidin-trano bisikileta - mety vahaolana
Inona ny hidin-bisikileta matanjaka indrindra?
nyLocking amin'ny bisikileta matanjaka indrindra
Kryptonite New York Fahgettaboudit:Natanjaka IndrindraUHidin-trano.
Abus Granit X-Plus 54 Mini: Mahery sy maivana.
Kryptonite New York Standard: Mahery sy lehibe.
OnGuard Brute Mini: Mahery sy mora vidy.
Pragmasis Protector:Natanjaka IndrindraRojo mikatonaHidin-trano.
Kryptonite New York Noose:Natanjaka IndrindraChain azo entinaHidin-trano.
(Drill hums) (marmara) (kiakiakan'ny olona) - Tongasoa eto amin'ny What Inside, Lincoln aho ary i Dan ary anio ity no bisikileta an-tendrombohitra vaovao azoko tamin'ny Krismasy - bisikileta an-tendrombohitra faran'izay tsara. Ny fiarovana sy filaminana dia zavatra eritreretin'ny tsirairay. Ity lahatsoratra ity dia tohanan'ny SimpliSafe, serivisy fiarovana trano ho an'ny tranonao.
Hiresaka bebe kokoa momba an'io amin'ny faran'ny lahatsoratra isika, ka miambena hatrany. Tianay ny ho azo antoka arovana sy arovako ity bisikileta ity, ka nankany Amazon aho ary nividy ny hidin-damban'ny bisikileta dimy na efatra henjana indrindra azonao vidina amin'ny Amazon - toa ny fonosana izany - toa Handcuffs lehibe ho an'ny bisikiletanao izany. Mafy orina tokoa ny hidin'ireo bisikileta ireo? Andao hojerentsika hoe iza no fijoro henjana indrindra tokony hampiasain'i Lincoln amin'ny bisikiletany rehefa handeha hianatra izy.
Ity no hidin'i Lincoln izay nampiasainy nandritra ny fotoana kelikely. Andao hizaha toetra azy amin'ireto tovolahy mpanao clipper ireto. Andeha hojerentsika raha hihena ireo, ok ka ananako ary avy eo mifamofo azy fotsiny aho. (matimaty) - Mora be ny naneso azy - Mora tokoa ka na i Lincoln aza dia afaka manao izany amin'ny hozatry ny zanany. (mihomehy) - Tsotra be izany - Ity no hidin-trano bisikileta mahazatra azonao amin'ny telegrama ao anatiny.
Tena malemy tokoa ianao. Ka raha miezaka mitandrina tsara ny bisikiletanao ianao, dia mety tsy hovidiana ny hidin-trano mora indrindra. Andao handeha, okay, tsindrio London ankehitriny.
Mitohy! Mandrosoa, efa azonao! Saingy tena saika azony ilay izy, efa saika - (kiakiaka) - vitako izany! - Nahavita ianao! Mora tokoa ka na kilasy fahavalo amin'ny kilasy fahatelo, izany hoe, tovovavy manana tsipìka JoJo Siwa amin'ny volony, dia azo tapahina roa. Ka tena manontania tena ny safidinao amin'ny fiainana raha ity no hidin-dàlana bisikileta nofidinao hampiasaina ho an'ny zanakao amin'ny bisikileta lafo vidy na bisikileta lafo vidy aza rehefa alefanao any am-pianarana. London, misaotra ny hozatra. - Eny, veloma. - veloma.
Laka ny laharana voalohany. Ary ny hidy mafy indrindra eto an-tany? Ity hidin-bisikileta ity dia ampiasaina amin'ny moto ihany koa. Manontany tena aho raha afaka mamaky azy io miaraka amin'ity lehilahy ity isika. - Mahery be izy io.
Mahery izany. (mimonomonona) (pounds) Eny, mino aho fa nandalo ny fitsapana ho an'ity lehilahy ity. - Nahavita nify ve? - Inona no nataony? Somary amin'ny lafiny roa. nanao kely izany.
Ny hidin'ny bisikileta iray dia nametaka ny vy tamin'ity fitaovana ity. (mikapoka) (mozika mitombo) Eny, nahazo triatra taloha be tamin'ny tany izahay, avy tamin'io nahavoa azy io ihany. Vy mahery. - Masiaka be.
Nanamafy izahay fa hiasa miaraka amin'ity hidin-trano ity ny clipper sy ny sledgehammer) manapaka zavatra iray, manapoka ny bisikileta ary handeha ianao. Toy izany koa ny grinder zoro iray hanapaka ity lehilahy Master Lock mahery setra ity? (mozika faly) Tsia! - Tsy naharitra ela. - Nanisa ve ianao? - Um, sahala amin'ny - minitra? 30 segondra? - 20 segondra - Feo mafy - Ary maharary ny bisikiletako - toa tsy maninona ny bisikiletanao. Eny, tsy maninona ny bisikiletanao, tsara ny mpitroka hataonao - Eny! - Sahala amin'ny hoe manao lahatsoratra mamaky bisikileta izahay, tsy izany no tanjontsika.
Mahavariana izany - inona izany? Bike Lock.- Amin'ny hidy bisikileta rehetra hitanao teo, ity no lafo indrindra, $ 135.- Izany? - Ie.
Titanium izany --- Mihoatra noho io rojo io? - Mihoatra noho io rojo kryptonite goavambe io, eny - Tsy dia mavesatra loatra izany. (mozika faly) - Karakarao ny rantsan-tananao, Lincoln - Mahafinaritra ny mijery azy ity. (hiaka) - Ow! - Jereo ity, Titan.
Avy hatrany tamin'io zazalahy ratsy io.- Tonga teo amin'ny rantsan-tanako ilay izy toa hafahafa misosa. Tena toy ny clamp eo amboniny.
Fa hitako io spark kely io, inona izany? - Reko fa toy ny feo mikitroka kely ilay izy, saingy noheveriko angamba fa io sosona plastika io no eo amboniny. Saingy tsia, nadio fotsiny ilay izy. - Tsisy fika. - Aza mividy an'io hidin-trano $ 135 io.
Io no lafo indrindra. Tsara ho fantatra. Tsy fahombiazana - Miakatra amin'ny manaraka - Kryptonite! (Mozika rock) Iza no mampiasa ny Kryptonite? - Eny, ao amin'ny andininy Batman, Kryptonite nampiasain'i Batman hanohitra an'i Superman - Izany no ampiasain'i Batman hanohitra an'i Superman.
Tazomy izany, Lincoln, nangalatra ny bisikiletin'i Batman aho fa nahatonga azy io (nihomehy), sendra izany fotsiny. Tsy mandeha izany. Tsy tsara. (mihomehy) Kryptonite Evolution. Mandehana! (mozika manandratra) (mikotrika) Misokatra ny plastika, ny plastika ihany no ao aminy, fa ny fahamendrehan'ny vy kosa dia mbola matanjaka tsara, ankehitriny ho an'ny fitsapana sarotra indrindra.
fonosana ambany t47
Haharitra hafiriana, Rohy? - Eh, telo minitra. - Telo minitra? Latsaky ny 30 segondra no lazaiko. (Hira fifaliana) Tapaka, atsaharo.
Ajanony ny fotoana. Tsy vitan'ny nanao incision fotsiny aho fa nanapaka sisiny roa samy hafa ary nanapaka faritra iray manontolo mba hahafahanao mandeha avy eo, mety mafana, aleo jerena somary mafana. Ka afaka nandeha toy izany ianao avy eo. - Tsisy fika! - Esory izany. - Hafiriana izany? - Zahao ny hafanany! Notapahiko fotsiny ny zava-drehetra.
Mafana be, nodorako tanteraka ny rantsan-tanako. - Azoko kitihina ve? - Aza mijery, hitanao ve izany mahalala? Dorana io. Tsy manana fahatsapana aho izao.
Kryptonite! Ity dia New York Lock Kryptonite. Miezaka miteny ahy ianao mba hanadino. Matavy ity lehilahy ity, heveriko fa tsy hiasa eto.
Afaka aho. Tsy afaka mihodina akory aho. - Eny, ity no nahavita ny fitsapana voalohany. (Popping) (mozika miakatra) - Midika izany fa tsapako fa nilatsaka kely teo io.
Sarona plastika tsara fotsiny io eo amin'ny faran'ny azy. Noheveriko fa nandroso aho, saingy tsia, misy vy mavesatra ao ambany. Okay, ity dia nandalo ny fitsapana sledgehammer.
Lincoln, mandra-pahoviana no hitanao fa maharitra? - Ity dia maharitra 15 segondra .- 36 segondra. - Wow, tsara daholo. - 36, hoy aho, 36-26 segondra. (Hira fifaliana) Nandalo izahay, saingy tsy nivoaka ny trano mimanda.
Tsy toy ny avy ao amin'ny lapa io. Izy io dia karazana, tiako holazaina, afaka nanao ny fanapahana indroa toy ilay farany aho. (Mozika ambony) (hum) Andao handeha.
Tsara tarehy izany ary nilona fotsiny, fa azonao atao ve ny miala amin'ilay bisikileta? Tokony hanana ny fanapahana faharoa betsaka aho (mozika mitohy) Boom, izany no tokony ho nataontsika hatramin'ny voalohany. Tsy nahy nanao fahatapahana faharoa aho. Ianao no mpandresy.
Fantatsika fa misy hidin-trano toa ireto roa ireto izay mora vaky ihany amin'ny zavatra vitsivitsy toa ny clipper, ny sasany somary matanjaka kokoa, toa an'ity rangahy ity na ity. Mavesatra kokoa izy ireo ka somary marimaritra iraisana. Ny grinder zoro dia afaka manapaka saika ny vy rehetra, ny karazana hidy rehetra.
Tena tiako ity iray ity - tena milay. - Mahafinaritra ilay izy. Misy fomba maro koa ahafahanao miaro ny fianakavianao, ny tranonao ary ny fanananao.
SimpliSafe no nofidinay. SimpliSafe dia mandaitra ary azo itokisana amin'ny fitazonana ny trano azo antoka. Ny zava-drehetra dia arahi-maso 24/7 avy amin'ireo matihanina izay hiantso anao raha sendra vonjy maika ary handefa polisy raha ilaina izany.
Tena mora ampiasaina izy io ary tena intuitive. Nametraka azy tao anatin'ny fotoana fohy aho. Hanangana trano izahay ary amin'ity taona manaraka ity trano hofaina izay onenanay ankehitriny dia aza avela hametraka visy amin'ny rindrina.
Ireo sensor rehetra samy hafa, ny mpanara-maso, izy rehetra dia afaka nanohy nametaka taratasy fametaka hafa noho ny lakolosim-baravarana, fa teo amin'ny lakolosim-baravarana no nahafahako nampiasa ny lavaka fanidiana izay efa teo amin'ny lakolosim-baravarana mahazatra. Ankehitriny miaraka amin'i SimpliSafe dia manana lakolosy varavarana isika izay mirakitra izay rehetra miseho, na manindry ny lakolosim-baravarana izy na tsia, dia efa hitantsika izany. Manana sensor momba ny monoxide karbonika na ny famoahana rano amin'ny toerana samihafa aza izahay ary hanara-maso raha ao an-trano isika na tsia.
SimpliSafe dia manana vidiny ara-drariny sy marina tsy misy fifanarahana na sarany miafina ka tsy hiditra amin'ny fifanarahana maharitra mifikitra amin'ny rafitra fiarovana. Ary voaomana amin'ny toe-javatra ratsy indrindra izy ity rehefa maty ny WiFi anao na ny herinao dia miala amin'ireo fiasa tena tiako, toy ny maheno feon-kira kely ao amin'ny efitrano malalaky milaza amiko fa nisokatra ny iray amin'ireo varavarana. Tahaka ireo fisehoan-javatra tena misy fandinihana ireto izay toa, hey, misokatra ny varavaranao, mandehana, akatona ny varavaranao.
Ka na manofa trano ianao na manana trano dia tena mamporisika ny SimpliSafe aho fa nahomby tamin'ny fianakavianay izany. Raha te hahafantatra misimisy kokoa momba izany ianao dia afaka mitsidika an'i simpleisafe.com/whatsinside ary mahazo ny fampahalalana rehetra apetaho ilay rohy ao amin'ilay famaritana.
Misaotra anao SimpliSafe nanohana ity lahatsoratra ity. Nahafantatra zavatra betsaka momba ny fiarovana isika androany. Inona no azo antoka ary inona no tsy? - Eny, toa ity iray ity, fa tsy ny azo antoka indrindra.
Fa ity iray ity, eny, azo antoka tsara. - Ampahafantaro anay amin'ny hevitra iza no manidy ny bisikileta tianao indrindra sy iza no hovidinao amin'ny farany? (Mozika faly) Ka toa misy mpangalatra tonga eo am-baravaram-baravaranao, hitanao, hitako tanteraka izy, raisiny, lincoln io. (miverimberina ny lakolosim-baravarana)
Inona no hidin-trano tsara indrindra ho an'ny bisikileta?
Lock amin'ny bisikileta tsara indrindratamin'ny 2021: Mahery sy azo ampiharina
Abus Granit X-Plus 540. Thetsara indrindrarehetra-manodidinahidin-trano bisikileta, amin'ny karazana rehetra, misy ankehitriny dia mety ho ny Abus Granit X Plus 540.
Hiplok rojo volamena.
Ny halatra bisikileta an-tendrombohitra no zavatra ratsy indrindra mety hitranga amintsika tsirairay amin'ny bisikileta an-tendrombohitra, ary raha mihidy eo imasom-bahoaka ianao, dia alao antoka fa tena azo antoka izy io. Ankehitriny dia hasehoko anao ny maha-mora ny bisikileta an-tendrombohitra ary hasehonay anao ny fomba hahatonga ny bisikiletanao ho azo antoka sy azo antoka araka izay azo atao. (Hissing) (antsy maranitra ny tabataba) Na voahidy aza ny bisikiletanao dia tsy azo antoka izany.
Ny hidin-trano rehetra dia mety ho ara-teknika raha ho hitanao vaky, na tapaka, potehina, nongotana na notsofana. Ary ny lakilen'ny halatra bisikiletao dia ny hamelanao azy malalaka ho an'ny mpangalatra. Ka hanandrana zavatra eto aho.
Hanandrana hangalatra ny bisikiletako fotsiny aho mba hanaporofoana zavatra aminao. Andao hojerentsika ny fomba fiasan'izy io. Mety manontany tena ianao hoe maninona aho no manao akanjo mavo mamirapiratra fa tsy, ohatra, tampon'akanjo mainty sy tsy taitra.
Ny teôriaziko dia ny hoe tsy miraharaha ireo mpangalatra. Ny fisokafana no politika tsara indrindra. Tonga dia mankany amin'izay tadiaviny izy ireo ary mandray izany.
Heveriko fa hanandrana hanao toy izany koa aho. (mozika quirky) (siotsioka) Ka ny morontsiraka dia mazava tsara ny hidirana ary mangalatra ny bisikiletako manao ny marina, tsy maninona ka fanilihana kely: nampiasa hidin-trano ratsy tsy mora vidy aho ho an'ireo sy ireo mpikapa bolt, tsara ho an'ny Asa mafy 8mm stud. Saingy ny tiana holazaina dia hoe te hampiseho fotsiny aho fa afaka mandeha mitondra ny bisikiletako fotsiny, tsy nisy nanisy fiheverana na inona na inona.
Mazava ho azy, misy toe-javatra samihafa ho an'ity ary mety efa hitanao tao amin'ny fantsona YouTube azy i Casey Neistat fa nanao tabataba betsaka kokoa izy nefa mbola tsy nahasarika olona. Fa ny tiako hamafisina fotsiny dia ny resaka bisikileta ampahibemaso. Ka na inona na inona ataonao dia mila aorinao tsara izany.
Andao hiverina any amin'ny studio isika ary jereo ny tena hidiny alohan'ny hanehoanay anao ny fomba fampiasana hidin-trano tsara kalitao. Ankehitriny dia tsy maintsy dinihinao ny vidin'ny bisikiletanao. Raha zavatra tena tianao izany dia tianao ny hikarakara azy.
Ka raha zohina, ny vola zato kilao ho an'ny hidin-trano dia tsy vola be laniana. Saingy azonao atao ny mandany £ 10 amin'ny hidim-baravarana. Miankina aminao tanteraka izany.
Nandany ny habetsaky ny faran'izay betsaka azo atao foana aho ary nahazo ny hidim-baravarana tsara indrindra, raha tsy hidin-trano marobe, nitondra anao namaky ny karazana hidin-trano teny an-tsena ary nianatra izay mahasoa azy ireo sy izay tsy. Andao jerena aloha ny D-lock mahazatra. Ka ireo dia tena fantatra amin'ny hoe hidin'ny bisikileta izay misy ny mombamomba ny D, amin'ny ankapobeny rehefa apetrakao amin'ny sisiny.
Ity manokana dia nataon'i ABUS. Manana safidinay eto izay mety ho tsikaritrao, avy amin'ny marika samihafa. Manana hidy kryptonite vitsivitsy isika, manana hidim-baravarana ABUS ary manana hiplok ihany koa.
Ny tsirairay amin'izy ireo dia samy manana ny toetrany manokana sy ny karazany mampiavaka azy, izay mifanaraka amin'ny karazana mpampiasa, ity no granita, mavesatra be io. Hidin-trano mavesatra tokoa io. Tena tsara amin'ny fanidiana ny bisikiletanao na aiza na aiza, tsy mahazaka harao, izany rehetra izany.
Fa ny olana dia sarotra be. Tsy ilay karazana hidin-trano no tadiavinao hapetaka amin'ny bisikiletanao ary tena tsy tianao ny mitondra azy ao anaty kitaponao. Ka ireo no zavatra tokony hodinihina amin'ny karazana hidy rehetra.
Angamba izany no ho fototra tsara indrindra azonao ampiasaina any an-trano, na dia lazainay foana aza fa tsara kokoa ny hidin-gadra ao an-trano satria betsaka no azo atao amin'izy ireo. Mety ho tsara ireo raha manidy ny bisikiletanao amin'ny toerana maharitra isan'andro ianao, ohatra, any amin'ny gara, raha commuter ianao, raha manana boaty bisikileta ao amin'ny biraonao na any am-piasana ohatra. Azonao atao ny mamela izany any ivelany, satria tsy mahazaka harafesina izy ireo ary amin'ny ankapobeny dia tsy misy na inona na inona manohitra hidin-trano toy izany.
Ary mety mahatsikaritra zavatra manokana momba an'io hidin-trano io ianao, ny granite, manana profil toradroa ny profil toradroa dia mahatonga azy io hikatona mafy satria afaka manapaka ny lafiny roa ianao, tsy afaka manapaka iray fotsiny ary avy eo mihodina malalaka. Izany dia nilaza fa raha mamaky zavatra matevina ianao dia karazana mahery fo satria karazana hidin-trano mahery vaika io. Fa ny D-hidy dia misy habe kely kokoa toa an'ity.
Ny zavatra tsara momba ny habe kely kokoa dia ny fitaterana azy ireo. Ity dia manana clip fehikibo. Avy any Hiplok, orinasa manampahaizana manokana amin'ny hidin-trano azo entina, noho izany dia foto-kevitra mahafinaritra be izy io.
Izy io koa dia hidin-trano azo antoka. Nomena isa Sold Secure Gold ity, izay ny laharana farany avo indrindra azonao raisina amin'ny hidin-trano. Toeram-pivarotana tena azo antoka, tsara sy matevina izy io.
Ary amin'ny lafiny sasany, ny fonosana kely kokoa toy izao, na dia sarotra kokoa aza ny mampiasa bisikileta arakaraka ny toerana fanidiana ny bisikiletanao, dia tena mahatohitra ny fomba maro ampiasain'ny mpangalatra hanakanana azy. ny cam hidy, tsy ho tafiditra ao anaty hidin-trano toa an'ity ianao. Raha azonao ampiasaina amin'ny bisikiletanao sy amin'izay hidiranao ny bisikiletanao, mety tsara aminao izany.
Ka afaka mahazo safidy hafa mifintina na dia misy hidin-trano vaovao aza. Ity iray avy any Kryptonite ity, ohatra, dia manana extension ihany koa. Mampiseho fotsiny izany fa azonao atao ny mampiasa an'io amin'ny fomba hafa kely, na dia somary kely aza izy io.
Ka io dia manana tombony amin'ny hidin-trano lehibe kokoa amin'ny habe kely sy kely kokoa. Mahazo safidy vitsivitsy ihany koa ianao miaraka amin'ny fanitarana tariby. Hevitra mahafinaritra izany.
Ao amin'ny tontolo mety dia te-hametaka ny mainframe amin'ilay zavatra ianao ary tsara kokoa raha afaka mampifandray ny kodiaranao amin'ny fomba rehetra ianao ary tsy mila manala azy ireo amin'ny bisikileta. Amin'ny ankapobeny, azonao atao ny mampitombo ny fiarovana anananao amin'ny fanidiana bebe kokoa ny bisikiletanao. Eto isika dia manana vahaolana vitsivitsy ho an'ireo izay mivezivezy maivana ary maniry fanamboarana kely fotsiny.
Ka ireto dia hidy fanakonana ary toy ny hidy rehetra, azonao amin'ny fenitra samihafa ireo. Ka ity dia tena mora tokoa. Tena maivana, azonao atao ny mametraka azy ao an-damosinao, eny fa na dia eo am-paosinao aza, ary manome fiarovana tsara anao izany.
Saingy izy ireo koa dia manao dikanteny mavesatra be amin'ny zavatra mitovy ihany izay matanjaka be, tena mandaitra ary noho ny endrik'izy ireo dia tsy voafetra amin'ny toerana ahafahanao manidy bisikileta ianao, izay mazava ho azy fa hiditra ato amin'ity lahatsoratra ity isika avy eo tena zava-dehibe tokoa. Mila mahafantatra ny fahaizan'ny hidin-trano ianao, safidy maivana kokoa eto koa, alohan'ny hirosoantsika amin'ny hidin-trano. Tena tsy tokony hampiasa zavatra toa izao irery ianao.
Ireo dia azo ravana mora foana. Izy ireo dia mety amin'ny fampiasana ohatra.
B. amin'ny fitoeran'ny bisikileta amin'ny carto anao dia alao antoka fa miraikitra aminy ny bisikiletanao. Ireo fatorana tariby manokana ireo dia fatorana tariby vy.
Tena mitondra ny sasany amin'ireny foana aho, ao anaty kitapoko ihany, amin'ny asako isan'andro, satria izy ireo dia mety ho tena ilaina amin'ny fisotroana kafe kely any amin'ny toerana ahitanao ny bisikiletanao, ny bisikiletinao, mety tadiavinao ario ny iray segondra. Fa aza mampiasa hidy maivana toa an'ity na koa ity hidin-trano kely mitambatra eto amin'ny ABUS ity, aza ampiasaina ho solon'ny fanidiana tena azo antoka. Ireo dia fanampiny kely fotsiny ho entina miaraka aminao rehefa mitaingina fiara, toy ny fanakanana kely ihany, fa ny fanakanana no fanalahidy eo.
Mazava ho azy fa misy lakile rojo. Milanja taonina izao ireo zavatra ireo. Matanjaka tokoa izy ireo, vita amin'ny vy mafy izy ireo, manana mekanisma fanidiana tsy misy mpangalatra izy ireo, porofon-asidra izy ireo, saika mahatohitra ny zava-drehetra.
Fa ny sazy amin'ny fanaovana hidy toa izao dia milanja taonina. Na any anaty kitapo aza dia mihodina eny rehetra eny izy ireo ka mila mieritreritra tsara momba izay hampiasana azy ireo ianao. Izany no antony anolorako tena hidin-trano ho an'ny fampiasana an-trano na mety haharitra kokoa toa anao amin'ny zavatra toy ny D-hidy mavesatra kokoa.
Fa misy antsasaky ny trano. Ankehitriny i Hiplok dia manao lakile rojo izay tena azonao atao toy ny fehikibo. Hem amin'ny isa naoty isan-karazany.
Ity dia maivana maivana kokoa, io dia mifanitsy amin'ny Sold Secure Silver. Saingy manana famaranana mavesatra ihany koa izy ireo, toy ny fenitra volamena. Ity dia ampahany mavesatra be ao amin'ny kitapo, fa ny mekanisma fanidiana azy kosa dia azo anaovana toy ny fehin-kibo ary mametaka ity zavatra manodidina ny andilanao ity.
Izy io dia manana antsipiriany feno taratra mba hahafahanao mitaingina ny bisikiletanao miaraka aminy ary ekena fa hidin-trano mavesatra izany fa raha vantany vao eo am-balahanao io dia mahagaga fa mora fantatrao fa manana rojo matanjaka ianao ary tsy voafetra koa ianao amin'izay ahafahanao mampiasa azy ireo. Ka raha manidy ny bisikiletanao amin'ny toerana samihafa ianao dia mety ho safidy mety aminao ny hidin-trano. Inona no fiarovana anananao amin'ny resaka hidim-baravarana, ny toerana tianao hanidiana ny bisikiletanao dia zava-dehibe ihany.
Ohatra, raha midina amin'ny làlana kely eto ianao izao, dia mety hieritreritra ianao fa milamina ihany ny toerana toy izany. Ity misy lalamby tsara sy azo antoka hanidiana ny bisikiletanao. Ny olana iray amin'izany dia ny fialana amin'ny lalana voakapoka ka izany dia hanome fotoana ny mpangalatra rehetra miasa amin'ny hidinao.
Raha manana hidin-trano tsara kalitao ianao dia hampiasa angovo fikosoham-borona, na inona na inona mampihetsi-po kely. Ka raha ataonao mora kokoa ho azy ireo izany amin'ny tsy fahitana imasom-bahoaka dia tsy tsara izany. Ka andeha isika hijery ohatra hafa amin'ny toerana hisorohana ny tadin'ny bisikileta eto. Betsaka ny olona no mampiasa ity toerana ity hanidiana bisikileta ary mety hieritreritra ianao fa tena toerana tena tsara hanidiana bisikileta.
Diso tanteraka anefa ianao. Ity dia toerana tena ratsy hanidiana bisikileta ary antony iray mahatonga an'io, be dia be ny bisikileta eto, toerana mora be ho an'ny mpangalatra tsy miangatra ny mijery ny tanany amin'ny bisikiletanao ary mifanaraka amin'ilay hetsika fotsiny. Ny zavatra reko farany tao amin'ny GMBN sy GMBN Techis dia ny hoe mpangalatra mpamonjy entana no hisolo toerana azy ireo, ka manana kitapo fandefasana entana lehibe izy ireo ary tonga any amin'ny toerana toy izao, miondrika haka tahaka ny mamoha bisikileta, saingy manandrana tokoa izy ireo mpikapa bolt na izay ananany ary avy eo mitaingina bisikileta voalaza fotsiny.
Araka ny nolazaiko teo aloha, ny fisokafana no politika tsara indrindra. Izany indrindra no ataon'ny mpangalatra. Averina indray, mba hanasongadinana ireo faritra hafa izay mampiahiahy ny fanidiana ny bisikiletanao, ny gara dia ohatra tsara.
Terena ianao indraindray. Raha mila manidy ny bisikiletanao eo akaikin'ny gara ianao, ny iray amin'ireo vahoaka ireo dia alao antoka fa eo akaikin'ny CCTV io no ahitanao azy. Amin'ny ankapobeny, tena tadiavinao ny mpangalatra mpanararaotra rehetra hanana fotoana kely hiasana amin'ny bisikiletanao fa tsy ny bisikiletanao.
Izany no anaran'ilay lalao. Rehefa manidy bisikileta any afovoan-tanàna ianao dia misy zavatra farany tsy tokony ho adino: hidio ny bisikiletanao rehefa manidy azy mandritra ny hariva ianao, ohatra, eny akaikin'ny toerana rehetra misy fiainana alina mitabataba.
Hitanay daholo izao ny bisikileta. Tamin'ny fotoana sasany dia nihidy izy ireo ary nohitsakitsahina, niondrika ireo bisikileta, noho izy ireo sendra toerana ratsy. Tsy fahadisoan'ny tompony izany, fa ny fiainana amin'ny alina sy ny fikorontanana ary ireo zavatra mandanjalanja rehetra izay manidy ny bisikiletanao.
Izao aho izao, toerana tena tsara io raha ny marina. Manana tanana tsara sy mafy ianao, midika izany fa misy teboka maromaro ahafahanao manidy ny bisikiletanao. Azonao atao ny mahazo azy tsara sy akaiky amin'ny alàlan'ny fampiakarana ny fehikibo eo ambonin'ny arofanina.
Avy amin'ny làlambe iray io, ka misy ny fifamoivoizana tsy tapaka izay hamono ny mpangalatra satria mety ho hitanao eo aoriako, olona marobe mandehandeha mpifaninana tsara amin'ny fanidiana bisikileta. Andao jerena haingana ireo safidy sy ny fomba ary ny fomba hamenoanao bisikileta. Ary hampiasa an'ity ho ohatra tsara aho.
Na aiza na aiza nohidianao ny bisikiletanao dia misy safidy betsaka amin'ny hidin-trano fidinao sy ny fomba fampiasanao azy ireo. Fiarovana tsara azo antoka, manana ny D-lock aho mandehandeha ny faritry ny lalamby, boribory manodidina ny kodiarana aoriana any aorian'ny bisikileta. Izany no lakile satria tsy azo esorina amin'ny bisikileta.
Manana tariby fiarovana fanampiny koa aho, tariby Kryptonite ity, nopetahako nanodidina ny fork sy ny kodia eo alohany, niverina irery aho ary nankamin'ny hidin-trano. Ka ny bisikileta dia tena azo antoka amin'izao fotoana izao. Manana baoritra aho izay mijanona eo an-tampony ihany ka mipetraka milamina.
Manantena aho fa tsy hisy hanelingelina izany. Raha tsy manana tadim-pitatra miaraka aminao izao ianao, saingy manana hidy tsara sy lehibe ary lava toy izany ianao dia hasehoko anao ny tetika kely milay izay tiako hampiasaina fotsiny mba hanampiana fiarovana fanampiny. Tsy mandeha matetika izao ary afaka manelingelina ny olona ianao raha manao izany amin'ny toerana sasany, fa io lalantsara io dia mandeha tsara aminy.
Ny bisikileta dia eo ambonin'ny arofanina, noho izany amin'ny ankapobeny dia mihantona ambonin'ny haavon'ny fiara ambonin'ny arabe iray izy ary mampiasa hidin-trano hidina ao aminy miaraka amin'izay, toy ny ataonao eo amin'ny sisin-dalana. Fa ny zava-misy fa ny bisikileta dia any an-dafin'ny sisin-tany no mahatonga azy io ho sarotra kokoa ny miasa. Raha sarotra ny miasa, dia handany fotoana ny halatra bisikileta, ary kely kokoa ny fiasana azy.
Ka fanapahana kely mahafinaritra no ampiasaiko matetika. Ankehitriny, ny tadin'ny bisikileta toy izao dia namboarina manokana hanidiana bisikileta ary izany dia amin'ny toerana mety indrindra. Izy io dia faritra be atao, be dia be ny toerana ipetrahan'ny besinimaro amin'ny toerana rehetra, betsaka ny olona mankafy kafe sy sandwich ary ny toy izany.
Ka toerana ratsy tokoa ho an'ny mpangalatra mandany fotoana be amin'ny fiasana amin'ny bisikileta. Izy nahita na hita mangalatra bisikileta. Ka toerana tsara ity.
Nefa misy zavatra vitsivitsy tsy tokony ho adino. Mazava ho azy fa manana ny hidinao ianao, noho izany ny hidin-trano kely kokoa toa an'ity dia hanao tsara ny asa. Tokony ho azonao antoka fa mitondra ny fiara ianao mba tsy hitrandrahana tsy nahy sy hanala ireo fandokoana nataonao.
Ankehitriny tiako ny mametraka ny ahy amin'ny crank; J ohatra, rehefa manainga ny any ambadiko eto aho dia mitondra ny lanjan'ilay bisikileta amin'ny pedal sy crank ary azoko atao ny mametraka ny hidiny manodidina azy ary mitazona azy eo amin'ny paositra mba ho bisikileta azo antoka mbola ho marefo . Anjaranao raha te-hampidi-doza an'ity ianao na raha te hampifandray azy amin'ny bisikileta miaraka amin'ny hidin-trano fanitarana, rehefa tonga any amin'ny paositra toy izany ianao ary ny toerana tokana misy dia ny ilan'ny iray efa misy? Jereo ny fomban'ny bisikileta. Raha tapany taloha toa izao dia jereo ny fomba fanidiana azy sy ny fomba nitondrany azy.
Azo inoana fa avelanao solafaka ny bisikiletanao? hikarakara tsara ny anao sa tsia ny anao rehefa manokatra ny anao izy ireo? Tena mendrika hodinihina izany. Etsy ankilany, tsy ho hitako ho ratsy loatra ilay bisikileta. Dia fitsangatsanganana araka ny fahitana azy io, manana hidin-trano Kryptonite izy ary misy tadiny fanitarana, izay milaza fa ny tompon'ity bisikileta ity dia mikarakara ny bisikiletany ary manantena aho fa hikarakara ny anao.
Ka raiso an-tsaina izany rehefa ampidirina ao ny anao, fa mitovy ihany ny lalàna mifehy. Mandehana amin'ny fiarovana farany ambony azonao atao. Amin'izay dia afaka nampiasa ny Hiplok aho tsy nisy olana.
salama ve ny tarts pop
Afaka nampiasa ny hidin-trano Kryptonite D aho, afaka nampiasa ny kisoa iray manontolo aho ary nampiasa io hidin-trano ABUS adaladala io, saingy zavatra mavesatra kokoa izany. Tokony hanana izay mety aminao ianao. Fa raha ny amin'ireo toerana hanidiana bisikileta dia toerana tsara ity. (Kodiarana bisikileta purr) Eny, zavatra mbola tsy nokasihiko lavitra tamin'ity lahatsoratra ity ny fomba fangalaran'ireo mpangalatra hidin-trano.
Misy fomba maro azo antoka fa azo antoka ny Gold Secure. Farafaharatsiny mba ahafahanao manaisotra haingana ny bisikiletanao, ity dia asa iray izay mandany fotoana kely amin'ny fotoanao. Ny manaraka dia ny ahafahanao manala azy ireo ary manaparitaka azy amin'ny marotoa, fa ny tena asa sarotra ataon'ny Shackle In The Castle dia mahatanty izany.
Izay mamela safidy telo hafa: mpamaky tavoahangy, mpamonjy tavoahangy ampiasaina amin'ny karazana D-lock fotsiny, amin'ity tranga ity dia tsy afaka mahazo iray ao ianao satria hidy izany, ka ny hidy kely misy ny fanitarana dia hevitra tsara ho an'ny tontolo iainana an-tanàn-dehibe. Arakaraka ny maha lehibe ny U-Lock na ny D-Lock no mahabe ny olana mety hitranga amin'ity karazana fanafihana ity. Ny sasany kosa dia mpanapaka baomba mazava ho azy, ny mpikapa bolt dia tsy ho tonga amin'ny toerana akaiky zavatra toy izany.
Mila bandy goavambe sy goavambe izy ireo hanapahana izany. Ireo mpanapaka bolt dia tena tsy manao afa-tsy tariby. Na dia manao izany aza izy ireo, toy ny efa hitanao teo aloha, manaova tadiny hoatran'ny dibera kely.
Mitandrema amin'izay rehefa mampiasa zavatra toy izao. Ny lehilahy farany dia hanafika grinder zoro mazava ho azy Vidio io. Noho izany, ny fanaovana azy amin'ny fantsona ambony any, tsy toerana tsara izany.
Ka raha hampiasa zavatra toy ny rojo mavesatra ianao dia alao antoka fa tsy eo akaikin'ny tany ilay rojo. Tianao ho avo araka izay azo atao izy io. Rehefa eo amin'ny gorodona izy dia afaka miasa ao aminy Mampiasà mpikapa sy potipoti-by lehibe.
Tsy maintsy mampiasa leverage be dia be ianao, indraindray manana sandry iray amin'ny tany ianao ary ny iray kosa manery azy. Diniho fotsiny ny toerana misy ny hidin-trano rehefa manidy azy amin'ny bisikiletanao ianao. (mozika quirky) Mety ho tsikaritrareo fa tsy manana hidy amin'ny bisikiletako aho fa manana kafe sassy fotsiny aho mandritra ny fotoana itondrako ary anaovako ny fanairana ny bisikiletako Garmin ary ny zavatra mahafinaritra momba izany dia rehefa misy olona eo nibolisatra ilay bisikileta, manantena aho fa maty ny fanairana ary manakana ahy.
Chris! Tsy bisikileta akory io, sakaiza. Eny, mahomby io. Novonoiko fotsiny ilay app.
Etsy sy eroa dia mila mijanona fotsiny ianao ary manao risika. Ka nivadika ny bisikiletako ary navadika ho Ha rd Gear, ny tena zava-mitranga dia rehefa misy mitaingina bisikileta ary manomboka bisikileta dia i-Chris! Inona-no mitranga inona no ataonao vady? E-bisikileta io. Avereno izany.
Ireo tovolahy EMBN ireo, mitady mafy bisikileta an-tendrombohitra fotsiny izy ireo inona no holazaiko? (Kodiarana bisikileta) Ka ny vahaolana farany farany indrindra raha tianao ny hijanonan'ny kafe tsy manara-penitra, tena nampiasako ho toy ny hidin-trano kely ny fiarovan-dohako, apetrako eo amin'ny kodiarako fotsiny izany, raha misy mamindra azy dia milatsaka izy ary tsy mahazo. tena lavitra - Ugh! Tsy rariny loatra, Andriamanitra ô, mila iray amin'ireo bisikileta tsy misy môtô na batery fotsiny aho! - Miverena fotsiny amin'ny EMBN, tohizo! Ary avelao izany ho lesona ho anao. Fa matotra, aza mampiasa an'io. Aza avela hilahatra amin'ireto zavatra ireto ny tenanao.
Ny tena ilainao dia hidy tsara sy mafy ary hidina tsara ny bisikiletanao. Vao avy nanaporofo aho fa na aiza na aiza hanidiana ny bisikiletanao dia tsy ho resy, fa azonao atao ny mampihena ny risika amin'ny alàlan'ny fampiasana safidy hidin-trano tena tsara, ka mandehana mifidy izay hidiranao ny bisikiletanao. Manantena aho fa nanampy anao io.
Ho an'ny lahatsoratra vitsivitsy hafa ihany koa, raha te hahita ny fomba hametahana vatofantsiky ny tany izay heveriko fa tena ilaina ho anao izy dia tsindrio eo raha hijery ireo karazana toro-hevitra fiarovana azonao eritreretina. CCTV, fiantohana, izany rehetra izany. Antenaina fa nahafinaritra anao ity lahatsoratra ity.
Farafaharatsiny mba antenaina misy fampahalalana tsara ho anao. Ka omeo ankihibe izahay ary kitiho ny bokotra fisoratana anarana ary mazava ho azy ny lakolosy fampandrenesana kely mba hahazoanao fampandrenesana isaky ny mampakatra lahatsoratra iray izahay. Marina, handeha hiasa aho.
Rehefa avy eo. (Beep) Ka nivadika ny bisikiletako, nanova azy ho lasa fitaovana, ka raha misy olona mandeha eo amboniny dia ho simba daholo ny kodiarana, tsy ho- (mihodina ny kodia bisikileta) Chris! Chris! - Ie, tsy rariny loatra, Doddy! - Tsy bisikileta akory io, sakaiza! (Angry romotra) (mihomehy)
Inona ny hidin-bisikileta tsy azo tapahina?
Kryptonite U-foto-bolotsara kokoa noho ny taribyfoto-bolosatria saika tsy azo atao izanyHetezoamin'ny alàlan'ny. Taribyfoto-bolomora ihanyHetezoamin'ny alàlan'ny satria mora tohina ny tariby. Tsara ambaratonga faharoa izy ireofoto-bolohiarovana ny kodiarana sy ny kojakoja misy anao, fa ahidin-tranoilaina mba hiarovana anaobisikileta.
Ahoana no ahafahako manidy tsara ny bisikiletako?
FOANAVOAFIDYNYMITOKYamin'ny zavatra mivaingana izay tsy azo hatsangana.VOAFIDYNYMITOKYamin'ny faritra mirehitra tsara miaraka amin'ny fivezivezin'ny tongotra avo. MAZOTOA izay azonaohidin-tranonybisikiletatsy azo hokapaina.VOAFIDYARAKA ny lanjan'ny sarobidy aloha, avy eo ny kodia aoriana, ary ny farany ny kodia eo aloha.
Mamirapiratra ny bisikileta, mahafinaritra izy ireo, madio ary mahomby amin'ny fivezivezena sy fivezivezena any amin'ny faritra an-tanàn-dehibe, ary misy bonus fanampiny, mampety anao kokoa izy ireo, fa raha ny fahafantaran'ny maro aminareo dia mety ho lasibatra mahasarika mpangalatra izy ireo na Tiako ny miantso azy ireo hanandrana hanakana anao ny avonavona sy ny fifalian'ny fianjadian'ny mpangalatra, niara-niasa tamin'ny kryptonite izahay, noho izany amin'ity lahatsoratra ity dia hizaha ny tokony hatao sy ny tsy tokony hatao amin'ny fiarovana ny bisikileta, na ianao dia miasa ho an'ny Commuting na mandeha any amin'ny fivarotana na mitsidika namana fotsiny, handinika ny fomba sy ny toerana hanidiana tsara ny bisikiletanao izahay, ny fomba tsara indrindra hampiasana hidin-trano mba hiarovana ny bisikiletanao ary koa ireo karazana hidim-baravarana isan-karazany amin'izay ianao afaka mamaritra hoe inona ny hidin'ny bisikileta amin'ny endriny sy habe ary ny karazany samy hafa dia misy tombony sy fatiantoka, ary ny lehibe kokoa aza dia tsy tsara kokoa izao alohan'ny hidirantsika amin'ny antsipiriany momba ny fomba sy ny toerana hanidiana ny bisikiletanao, handeha aho mihoatra ireo karazana hidim-baravarana misy, ny hidim-bava hita matetika dia omena isa noho ny tsy fahombiazany y. Ie, izany no teny vao hitako, fa azonao ny hevitra, ohatra, ny kryptonite dia mametraka ny hidiny eo anelanelan'ny iray sy folo. Ankehitriny ny hidim-baravarana rehetra eto amintsika dia manomboka amin'ny dimy, saingy azonao atao ny mahita izany fonosana izany ny fiarovana. Ny naoty dia amin'ny zavatra latsaky ny dimy dia matetika no ampiasaina ho karazana fanoherana kely rehefa mijanona ao amin'ny cafe amin'ny faritra ambanivohitra, na mety ho backup fotsiny? Ny bisikiletanao raha mandeha lamasinina ianao na zavatra hafa.
Ny karazana hidin-trano voalohany tokony ho fantatrao dia ny hidin-trano D. Izy ireo dia miainga amin'ny zavatra toa an'ity D-lock tsotra namboarina hampiasaina any ambanivohitra ka hatrany amin'ny hidin-trano tanteraka natao hanakanana ireo mpangalatra fanta-daza amin'ny faritra midadasika iray tsy hieritreritra momba ny tanànan'i Gotham aorian'ny nandraisan'ny ozona ary manana ianao hevitra mety eo anelanelany ihany, D-hidy dia heverina ho ny hidin-bisikileta matanjaka indrindra sy azo antoka azonao ampiasaina ary tsy mitovy amin'ny tanjaka sy karazana faharetana sy tanjaka ary lanjany ary koa endri-javatra roa ary hita taratra amin'ny vidiny izany. , zavatra toa ity dia lafo kokoa noho ny zavatra maivana sy tsy mateza kokoa ireo D-hidy ireo dia samy hafa habe ihany koa mba hahafahanao mahazo kely toa an'ity sy ireo lehibe kokoa toa ireny, ary natao hametahana ny bisikiletanao amin'ny zavatra tsy azo ovaina na ny mametaka faritra hafa amin'ny bisikileta toy ny kodiarana na ny dona f izay lavitra ary mampiasa paikady mahazatra ary paikady tsara ny fampiasana D-lock miaraka amina hidin-trano hafa toy ny hidin-tariby mba hiarovana ny faritra hafa amin'ny liky bisikileta kodiarana sy zavatra hafa anananao amin'ny bisikiletanao noho ny lockmeans doka fa mety hahasarika kokoa azy ireo ny mandehandeha sy mijery ao anaty kitapo, saingy tsy dia milamin-tsaina intsony izy ireo ankehitriny satria miaraka amin'ny fomba fanidiana isan-karazany. Afaka mahazo azy ireo ianao hidin-trano mitambatra na lakile fanalahidy na ireo misy tadivavarana izay natao hampiasaina amin'ny hidin-trano hafa.
Matetika ny hidin-tariby D-Lock dia afaka mampiato mpangalatra tsy dia mahazatra, saingy tsy dia azo antoka kokoa noho ny mpanapaka D-Lock sy ny bolt. Asa haingana amin'ny hidin-tariby matetika izy ireo dia tariby vy toy ity misy karazana plastika mifono amin'ny ety ivelany hisorohana ny harafesina lavitra kokoa dia manana hidin-gadra vinavina ianao hoe inona no hainao tsara indray fa samy manana ny mekanisma fanidiana azy ireo ity, nefa misy ihany koa ireo manana fanalahidy ary samy hafa ny haben'ny habeny sy ny tanjany izay azo antoka kokoa amin'ny ankapobeny. hidin-tariby fa tsy matanjaka noho ny D-hidin-trano Manana tombony fanampiny noho ny D-lock izy ireo, na izany aza, afaka mihetsika kely kokoa izy ireo noho ny fametahana rojo vy sy fiarovana ny faritra samihafa amin'ny bisikiletanao, toy ny D-hidin-trano dia karazana mihenjana sy henjana, izay indraindray mety ho sarotra kokoa hampiasaina amin'ny karazana Castle Castle izay ananantsika, ny vitsivitsy Matetika noho ny hafa nasehonay anao dia hidy fonosana izay ananantsika eto izao. Ny hidin-kazo azo aforitra dia mety ho ilaina tokoa satria izy ireo dia afaka maka toerana kely kokoa ao am-paosinao rehefa entinao izy ireo noho ny D-hidin-trano satria mivalona izy ireo izao ary avy eo dia mety ho tena ilaina izany, miankina amin'ny toerana fanidiana ny bisikiletanao sy ny karazana bisikiletanao mihidy, heverina ho azo antoka kokoa noho ny tariby izy ireo fa tsy azo antoka intsony noho ny D-hidin-trano azo itokisana satria mahazaka mpikapa bolt Tena tsara saw saw-tendrony tungsten na grinder zoro afaka manao asa fohy ny lohahevitry ny avo kokoa faran'ny hidin-trano dia ho hitanao fa misy fonosana vy matevina matevina matevina kokoa ary fantsom-baravarana mpangalatra avo kokoa ary koa baravarana kely kokoa eo amin'ny hidy hidy ireo zavatra ireo dia manasarotra olona iray hamaky amin'ny hidin-kery mahery na amin'ny farany ambany ampiarahina kely Tsy midika hoe tsy mandeha ny hidy, fa tsy mahazaka mpangalatra mahay na force majeure amin'ny fampiasana vy maranitra sy varingarina hidin-trano kely kokoa, miankina amin'ny lafin-javatra maromaro ny hidy na hidiny. Raha fantatrao ny etimôlôjian 'ity teny ity mba ampio ilay izy azafady araka ny toromarika misy eto. halatra bisikileta -Manjary toerana mafana toy ny fiantsonan'ny fiaran-dalamby ary mamporisika anao koa izahay hametraka ny bisikiletanao amina arabe milamina toa itony, raha azo atao, satria any amin'ny faritra mangina misy olona vitsy kokoa, ny mpangalatra dia mety homena fotoana bebe kokoa hiasana amin'ny bisikileta. .
Ary koa, mieritrereta zavatra hafa, toy ny mipetraka amin'ny kafe na mandeha an-tongotra be olona kokoa, dia mety mampatahotra ihany koa, ary mieritrereta momba ny toerana tsy mahazatra hanidy ny bisikiletanao ka ohatra tsara ireo lalamby ireo. Apetaho aminy ny bisikiletako, tsy amin'ity lafiny ity fa etsy an-daniny izay mivoaka eny amin'ny arabe mankany amin'ny toerana tsy dia mahasarika loatra. Misy mpiambina amin'ity toerana ity koa izay napetraka eo. Eo izy ary ho an'ny ankamaroan'ny Ny vintana dia ny hoe raha misy mpangalatra miasa amin'ny bisikileta dia hahatsikaritra toerana somary tsy mahasarika olona iray hiasa amin'ilay bisikileta koa izy ary koa antsipirihany an-tsokosoko dia ataoko ny hidin-trano izay misy ny lakile ary tsy pitsopitsony misimisy ihany koa amin'ity lafiny ity fa manasarotra kely kokoa ny fiasana amin'ny hidin-trano raha toa ianao ka manandrana ary misafidy ny hampifandray hatrany ny bisikiletanao amin'ny zavatra tsy azo hokapaina. Ny tiako holazaina dia mazava ho azy, fa ny paositra hazo dia mety ho tsara sy azo antoka, fa ny tsofa kosa dia hiasa fohy momba izany.
Manana safidy maromaro izahay mba hanananao azy toy ny fantson-drano. Indraindray ny olona sasany mihidy ny bisikiletany mba handriaka ny fantsona, fa izy ireo koa dia azo tapahina mora foana ary raha vita amin'ny plastika izy ireo dia azonao esorina fotsiny amin'ny rindrina raha tena tianao sy zavatra mendrika hanidy ny bisikiletanao, saingy afaka mampihena ny loza mety hitranga amin'ny fanimbana olona izay mandalo azy io fotsiny ary midona aminy. Misy ihany koa ny lalamby Zeorziana mahazatra eto izay namboarina tamin'ny vy natsangana ary ny zoro na ny fikosohan-tsofa dia hiasa haingana miaraka aminy, mora kokoa ny manapaka izany noho ny vy mihamafy azonao amin'ny hidin-trano tsara.
Tsy hasehoko anao ny fomba tsara indrindra hanidiana ny bisikiletanao sy ny teknika hampiasako ary misy toro-hevitra vitsivitsy hahatonga azy io ho azo antoka kokoa noho izany aloha dia faritra tsara io, lalana tsara io, tsy ianao io fantaro, tsy dia be ny famantarana ny asan-jiolahy, ao anatin'izany ny mpandeha an-tongotra be dia be, mazava tsara ary eh, fantatrao betsaka Betsaka ny olona eto ary manana lalàm-by manokana izahay eto izay tena tsara sy azo antoka ary ianao Fantatrao fa tsy misy olona afaka mitaingina bisikileta afaka manaisotra azy toy ny bollard na stump hazo azon'izy ireo notapahina na zavatra toa izany dia hakatako ny bisikileta araka ny sandan'ny ampahany tsirairay avy, miaraka amin'ny frame no tena sarobidy indrindra ampahany, arahin'ny kodiarana aoriana ary avy eo ny kodiarana eo aloha ka tadiavinao izany araka izay filaharany, raha azo atao dia hampiasa D-hidin-trano aho mba hiarovana ny endriny sy ny kodiarana any aoriana miaraka amin'ny D-hidin-trano izay rehefa Rehefa napetraka ny kodiarana aorin-damosina, hampiasa hidin-tariby koa aho ho fepetra faharoa hanamafisana ny kodiarana eo aloha. Ampandehano fotsiny amin'ny alàlan'ny fonosana D-Lock amin'ny alàlan'ny frame ary avy eo amin'ny kodia eo aloha ary avy eo miverina ao anaty ilay s-d-locklike sonext apetraka ny faran'ny d-lockback ary tsara indrindra, raha azonao atao, apetraho ny mekanika fanidiana ny d-hidin-trano satria mahatonga ny asa ho sarotra kokoa Miresaka momba ny lehibe kokoa, tsy tsara kokoa foana rehefa manana D-lock mafy orina izay malalaka be ianao avy eo any amin'ny toerana fanidiana ny bisikiletanao hamelana toerana hahafahan'ny olona misimisy kokoa Mangalatra mpangalatra hahazoana fitaovana ka Azon'izy ireo atao ny manokatra ny D-hidin-trano ary mila toerana kely ianao eo anelanelan'ny fanidiana ny bisikiletanao sy ny bisikiletanao, ary izany no mahatonga ny D-hidin-damosina kely kokoa toa ity izay ilaina amin'ny toe-javatra toy izany. Toa miharihary izany, ary ho miharihary amin'ny maro aminareo, saingy hitako ny olona nanidy ny bisikiletany tamin'ity fomba ity ho zavatra tena mafy orina izay tsy mihetsika ary tsy mandeha mankaiza, fa akaton'izy ireo, izay ny bisikileta tsy azo antoka akory fa mahatonga ohatra mahazatra fa misy zavatra toa an'io karazana bollard mitaingin-tsoavaly io, azonao atao ny manidy azy toy izany, manondrotra azy fotsiny ianao avy eo miala ny bisikiletako, hitanao izao taty aoriana ho fanampin'ny tariby na fa tsy tariby dia azonao atao ny mampiasa karazana hidin-trano hafa mba hiarovana ny kodiarana azo antoka eo aloha amin'ny frame ary mety ho hidin-trano na hidin-rojo na inona no tadiavinao fa tsy miaraka amin'izany ny hidiny mankany ambony, dia mora kokoa ny miasa fa tsy apetraka toy izany amin'ny ankapobeny, dia vao mainka tsara kokoa ny hidiny ary mahatonga anao hividy tsy dia manintona an'ireo mpangalatra izany ary raha manidy ny bisikiletanao amin'ny toerana iray isan'andro ianao, ohatra.
Ao amin'ny toeram-piasana, ohatra, dia azonao atao ny manidy mora foana ny hidin-trano toy izany amin'ny fatin-bisikileta mba tsy hitrandrahanao azy ireo isaky ny mandeha satria milamina tsara ny hidin-trano toa izao, fa mavesatra kosa. Manana fonosana manokana izy ireo ahafahanao mivezivezy hisorohana ny fidiran'ny rano sy ny fahasimban'ny toetr'andro amin'ny hidin-trano, izay mahatonga azy ireo ho tsara ho an'ity karazana tanjona ity, ny isa faharoa eo ambonin'ny laharan'ny tanjaky ny mpamokatra ary amidy soa aman-tsara amidy soa aman-tsara ity dia mahaleo tena andrana fitiliana sy fanamarinana izay manombana hidy mifototra amin'ny fenitra misy azy manokana, satria io matetika no hany tombana eken'ny mpiantoka. Raha fintinina dia fantatrao ny fomba fanidiana ny bisikiletanao, ny hidin-trano tianao ho entina aminao, ny filanao tadiavinao ary ny alehanao Miaraka amin'ireo teboka rehetra nifanakalozanay hevitra tamin'ity lahatsoratra ity dia tokony ho tsara ianao eny an-dàlana hihazona tsara ny bisikiletanao alohan'ny hidiranao amina habakabaka raha handeha ianao, ohatra, manana singa lafo be amin'ny bisikiletanao.
Tsy maninona raha azo antoka ny kodiarana sy ny sisiny satria esorin'ireo mpangalatra fotsiny ireo singa hiala amin'ny bisikiletanao ary avelanao miaraka amin'ny kodiarana sy ny fefy izy ireo. Ny lalao dia ny hiezaka ny hahatonga ny bisikiletanao ho tsy mahasarika indrindra an'ireo mpangalatra ary mitazona hatrany aza adino fa ny antilope dia somary mora mihaza, tsy mila resin'ny liona ianao, tsy mila ianao no antilopa malemy indrindra ary tendrony hafa rehefa misafidy bisikilety hampiasaina amin'ny toerana an-tanàn-dehibe Ary hanamparana azy eny, hevitra tsara ny fananana bisikileta izay tsy dia misy dikany loatra, fitaovana fotsiny io manomboka amin'ny iray mankany amin'ny amboradara. The Antelope AnalogyTsy tianao ny bisikiletanao ho lasa plumpest sy matsiro indrindra amin'ny endrik'i Antelope dia tsy dia misy dikany loatra, antenaiko fa nankafizinao ity lahatsoratra ity ary hitanao fa misy fampahalalana ary miaraka amin'ireo torohevitra ireo dia azonao antenaina ny hahatonga ny bisikiletanao ho azo antoka sy fotsy kokoa. mpangalatra raha tsy manana ankihibe ianao ary ampahafantaro anay amin'ny fanehoan-kevitra izay lahatsoratra tianao hojerena amin'ny ho avy sy ny toro-hevitra momba ny fiarovana amin'ny bisikileta anao.
Mandrapihaona amin'ny toast manaraka
Mangalatra hidy ve ny mpangalatra bisikileta?
Betsaka ny olona mieritreritra bisikileta nampangalatra môtô maka hidy. Fa izany dia mandeha ho an'ny tsotra ihanyfoto-bolo- ny karazany azonao ataohakamiaraka amin'ny penina. Amin'ny ankabeazan'ny tranga dia haingana sy mora kokoa ny manapaka mivantana amin'ny alàlan'ny mekanisma manodidina nefa misoroka ny tena izyhidin-trano.7 feb 2018
Azonao atao ve ny manapaka ny mpikapa kryptonite hidy?
KryptoniteVaovao-UKryptoLok Standard: ItyU-hidin-tranomampiasa mekanika mitazona kapila, toy ny New-UEvolisiona, ary izao dia miaraka amina endrika tsy misy afa-tsy bara roa toy ny safidintsika voalohany ihany. (Ilay kinovaiSIKAtsy notsapaina.) Saingy, ny olana lehibe indrindra amin'izanyhidin-tranotsy niova:Ireo mpikapa bolt dia afaka manapakaamin'ny alalany.26 Mey 2021
Inona no hidin-trano tsy azo tapahina amin'ny mpikapa bolt?
Ny rojo tsara indrindra dia manana rohy hexagonaly na toradroa
Ny rojo vy mavesatra sy mafy orina miaraka amin'ny rohy hexagonal dia mahasakana ny saika mpangalatra rehetra ampikapa bolt. Ny rohy hexagonal (na toradroa na trapezoidal) dia tsy ahafahana manao izanympikapa bolthahazoana gripa.4 feb 2021
Ahoana no ahafahako manao ny bisikiletako ho tsy dia tian'ny mpangalatra?
Fantson'ny loto na fantsona vitsivitsymanaomijery izanytsy dia manintonaho an'ny mpisoloky. HO AN'NYbisikiletakasety fiarovananyseza fipetrahana, kitapom-batsy ary toerana isan-karazanynyframe hoataovy ny bisikiletanaony faritra toa reraka sy marefo.5 Mar 2021
Inona ny hidin-trano tsy azo tapahina amin'ny mpikapa bolt?
Afaka manapaka ny hidin-trano ve ny hidin-trano?
Mpanapaka boltmoraHetezoamin'ny alàlan'ny taribyfoto-bolo, fa mendrika ny mampiasa extension extension amin'ny cable hampiatoana ny chancers! Ka raha tianao ny anaohidin-trano bisikiletahametraka ady amin'nympikapa bolt, makà vita amin'ny vy mafy, ary alao ny safidy matevina indrindra.